American Center, Tanjombato : «Vehivavy 10, lohahevitra 10, fanamby 10 » | NewsMada
Nisokatra ny 8 marsa teo ilay fampirantiana miavaka momba ny vehivavy: «Vehivavy 10, lohahevitra 10, fanamby 10 » no lohahevitra amin’izany. Natao hanamarihana ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy karakarain’ny American Center sy ny Fireflies ary ny masoivoho amerikanina ny hetsika.
Natao hampisongadina ny zava-bitan’ireo vehivavy malagasy miasa eo amin’ny sehatra samihafa eto amin’ny firenena ny fampirantiana. Afaka nanova ny tontolo manodidina azy ireo vehivavy malagasy ireo tamin’ny alàlan’ny asa nataony sy ny fandresen-dahatra tao amin’izy ireo ho amin’ny hoavy tsara kokoa. Nahafahana nioitra tamin’ny olana ao anatin’ny tontolo izay mbola anjakan’ny lehilahy ihany koa.
Mpisehatra manan-danja eo amin’ny tontolo politika, fanabeazana, asa fanaovan-gazety sy serasera, fandraharahana, tontolo iainana, siansa sy teknolojia ary ny fiarovana ny zon’olombelona ireo vehivavy ireo.
Mandritra ny volana marsa, misokatra ho an’ny besinimaro ny American Center ny alarobia 9, 16, 23 ary 30 marsa hiara-hitafatafa amin’ireo vehivavy 10 ireo mikasika ny lohahevitra maromaro. Anisan’izany ny hoe : “Vehivavy sy ny politika ary ny fahefana”. Eo koa ny mikasika ny Vehivavy sy ny asa fanaovan-gazety, ny Vehivavy sy ny fanabeazana, ny Vehivavy sy ny siansa ary ny teknolojia, ny Vehivavy sy ny tontolo iainana, ny Vehivavy sy ny zon’ny olom-pirenena ary ny Vehivavy sy ny kanto ary ny kolotsaina.
Teo amin’ny masoivoho amerikanina
Nampiantrano ireo tovovavy tezaina ao amin’ny Akany Avoko Faravohitra kosa ny masoivoho amerikanina ny 8 marsa teo. Nifandimby nitantara ny làlana nodiaviny mandra-pahatonga teo amin’ny fahombiazana ny mpanolotsaina ara-kolontsaina ao amin’ny masoivoho, Denise Jobin Welch. Toraka izany ny manam-pahaizana momba ny tontolon’ny zavaboary any an-dranomasina, Ramahery Vola sy ny manam-pahaizana momba ny politika, Rafitoson Ketakandriana, ary ny manampahaizana momba ny raharaham-mpitsarana Hasimbelo Rindra.
Nitsidika ny manodidina ny tanànan’ny masoivoho tao Andranomena ireo tovovavy ireo ary afaka nijery ny foibe fanodidinana fako sy rano ary ny dobo filomanosana sy fanaovana fanatanjahantena. Niara-nisakafo tamin’ny mpiara-miasa eto amin’ny masoivoho ny ankizy avy eo.